एमाले महाधिवेशनमा कुन-कुन देशबाट आउदै छन् प्रतिनिधि ? -3ghumti
२०७८, मंसिर १४ गते मंगलवार
# प्रल्हाद शाह
# पदाधिकारीको सूची
# विनोद चौलागाई
# सितल जुन
# वरिष्ठ उपाध्यक्ष
# वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
# ज्योति बिकास बैंक
# सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक
# ज्ञानेन्द्र कार्की
# दुर्घटना बिमा रकम
Nov 30 2021 | २०७८, मंसिर १४गते
एमाले महाधिवेशनमा कुन-कुन देशबाट आउदै...
एमाले महाधिवेशनमा कुन-कुन देशबाट आउदै छन् प्रतिनिधि ?
मंसिर ९, २०७८ बिहिवार १८:१६ बजे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा आतिथ्य ग्रहण गर्न भारतबाट विभिन्न पाँच दलका नेता आउने पक्का भएको छ । भारतबाट पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता हर्षवर्द्धनको नेतृत्वमा एउटा टोली आइसकेको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
त्यस्तै भारतबाटै अन्य चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि आउने भएका एमाले विदेश विभागका प्रमुख डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनबाट भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले भिडियो सन्देश मात्रै पठाउने भएका छन् ।
कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै सीपीसीका कुनै पनि नेता नेपाल नआउने भएका हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि करिब एक वर्षदेखि कुनै पनि देशको भ्रमणमा निस्किएका छैनन् । चीनबाट सन् १९९३ देखि अहिलेसम्म भएका सबै महाधिवेशनमा अतिथि आउने गरेका थिए ।
भट्टराईका अनुसार महाधिवेशनमा सहभागी हुन आठ देशबाट १५ जना प्रतिनिधि आउने पक्का भएको छ । हालसम्म २५ वटा देशबाट शुभकामना सन्देश आइसकेको छ । एमालेले चीन, म्यानमारदेखि उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत निमन्त्रण गरेको थियो ।
एमाले महाधिवेशन : निर्वाचित पदाधिकारीद्वारा सपथ ग्रहण
फराकिलो मतान्तरले एमाले अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना
एमाले उपाध्यक्षमा घनश्याम पराजित, ओलीको सूचीका सबै विजयी
सेनाका बिचौलिया फेरि सल्बलाए
कर्णालीमा प्रधान सेनापतिको कुदाकुद
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालीमको दीक्षान्त समारोहमा सरिक
ज्योति बिकास बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
भीम रावल : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाए अध्यक्ष छाड्ने
जंगीअड्डामा भारतीय ट्रक
सेनापति गण्डकी प्रदेशमा
ओलीलाई गाली गर्ने हो भने वीपी माथि प्रश्न उठाउनुपर्छ